Nwere ike ghara inwe ndị ọhụrụ ajụkwa ihe: iPhone 6? Ka ihe a ghara ewute gị. Ọ bụghị na a nnukwu ihe. Ị pụrụ ịnụ ụtọ niile ọhụrụ atụmatụ iOS 8 na-ewetara iPhone 6 na gị iOS ngwaọrụ kwa. Dị nnọọ na-iOS 8 ibudatara na arụnyere na gị na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. Isiokwu a na-elekwasị anya na-agwa gị otú ị nweta nkwalite ka iOS 8 na gị iOS ngwaọrụ. Soro mfe ndu ịmụta otú imelite ka iOS 8.
Part 1. Prep-arụ ọrụ maka upgrading ka iOS 8
Part 2. Olee otú iji kwalite ka iOS 8 site na iTunes (-atụ aro)
Part 3. Olee imelite ka iOS 8 n'ikuku (na iOS ngwaọrụ ozugbo)
1. Tulee ngwaọrụ ndakọrịta. Unu-enwe obi ụtọ dị nnọọ ma! Ihe mbụ i kwesịrị ime bụ iji hụ ma gị iOS ngwaọrụ bụ ike na-agba ọsọ na iOS 8 ma ọ bụ. Apple ka depụtara si na iOS ngwaọrụ ndị na-Ofụri Esịt dakọtara na iOS 8. Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị bụ na ndepụta a, mgbe ahụ ị nwere ike nweta nkwalite ọ na-iOS 8. Ok, ọ bụrụ na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka bụ na ndepụta (ego nseta ihuenyo n'okpuru), mgbe ahụ, ị ga-eme ndị na-esonụ Prep ọrụ.
2. hụ na gị na iOS ngwaọrụ nwere ezuru nchekwa maka iOS 8 update. E nwere 2 ụzọ iji wụnye iOS 8 na gị iPhone, iPad na iPod aka: site iTunes na na gị iOS ngwaọrụ ozugbo. Ị nwere ike ịhọrọ ma ụzọ ị ga-amasị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-agbalị nweta nkwalite ka iOS 8 na ngwaọrụ gị, na-eme ka hụ na e nwere 6GB nchekwa na ngwaọrụ gị, n'ihi na Apple-achọ ya na-adị. Kpọmkwem nchekwa chọrọ bụ dị iche iche n'ihi dị iche iche ụdị nke iPhone, iPad na iPod aka. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na ọtụtụ nchekwa na gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụ ị na-agaghị na-eme atụmatụ ka ihichapụ ihe na ngwaọrụ gị onwe elu ezu ohere, nanị nhọrọ eme iOS 8 update bụ iji kwalite site iTunes.
E wezụga ndị n'elu kwuru banyere Prep ọrụ, iji jide n'aka na nche nke gị data ma welie na ọṅụ nke iOS 8, ​​ị ga mma iji a ghọta nke isiokwu 5 ihe ị ga-eme tupu upgrading ka iOS 8.
Gịnị mere upgrading ka iOS 8 site iTunes na-atụ aro?
Naa nchekwa a chọrọ maka iOS ngwaọrụ. Upgrading ka iOS 8 n'ikuku-achọ ka ị dịkarịa ala 4.6GB nchekwa dị na iOS ngwaọrụ, nke pụtara na ị nwere kwadebe 6GB ihe ịga nke ọma update. mgbe ma ọ bụrụ na ị na-eme iOS update site iTunes, nanị ihe ọ chọrọ ka ị 2GB nchekwa na gị iOS ngwaọrụ.
Obere oge dị mkpa. Upgrading ka iOS 8 site iTunes bụ ngwa ngwa karịa ime ya na ihe iOS ngwaọrụ ozugbo. A onye na discussions.apple.com ka mere mkpesa na ọ chọrọ ya karịa 30 awa ibudata echichi ngwugwu na ya iPhone mgbe ọ naanị eri ya na-erughị ọkara otu awa na-eme iOS 8 update na ya na kọmputa.
Netwọk ọzọ bụ ike. The netwọk nke a na kọmputa bụ ndị ọzọ mụ karịa WiFi na ihe iOS ngwaọrụ. N'oge mmelite usoro, ụfọdụ ndị kwuru na WiFi disconnection mgbe niile rụpụtara na melite ọdịda.
Jailbroken iOS ngwaọrụ ga-kwalite ka iOS 8 site na iTunes. Ma, update ga-ada na ọrụ ga na-enweta ihe iOS na ngwaọrụ na bụ na ndị nwụrụ anwụ nwa ihuenyo ma ọ bụ na Apple logo rapaara na ngwaọrụ.
iOS ngwaọrụ na-agba ọsọ iOS 6 ma ọ bụ mbụ nsụgharị ga kwalite ka iOS 8 site na iTunes. Ma ọ bụ update ga-ada kwa.
E nwere 3 nhọrọ na ngụkọta iji kwalite ka iOS 8 site na iTunes. Onye ọ bụla ụzọ nwere ya uru. Ịhọrọ ụzọ ziri ezi nke ahụ dị mma maka gị!
Nhọrọ 1: mfe ụzọ ime iOS 8 update site iTunes:
Nzọụkwụ 1. Melite gị iTunes ka ọhụrụ version. Jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod emetụ gị na kọmputa na ẹkedori iTunes. Biko jide n'aka na kọmputa gị na ejikọrọ na a anụ netwọk.
Nzọụkwụ 2. On iTunes, pịa gị iOS ngwaọrụ. Na mmapụta window, ị pụrụ ịhụ ozi maka gị iOS ngwaọrụ. Ma e nwere akara-agwa gị na version iOS 8.0.0 bụ maka gị iOS ngwaọrụ. Dị pịa 'Update', mgbe ahụ, ị ​​ga-nweta nkwalite gị na ngwaọrụ iOS 8.
Uru: Ọ bụ nnọọ mfe iji rụọ ọrụ. Ọ dịghị mkpa ka ọ bụla download femụwe ma ọ bụ mee ihe ọ bụla mmezi ọrụ.
Ọghọm: Ị ga-echere ruo ogologo oge n'ihi na iTunes ibudata echichi ngwugwu. N'oge wụnye usoro, i nwere ike ida gị data
Nhọrọ 2: jide Mgbanwe Key ma pịa 'Update' na iTunes
Nzọụkwụ 1. Download femụwe n'ihi na gị iOS ngwaọrụ dị ka gị iOS ngwaọrụ nlereanya. Zọpụta ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Download na wụnye ọhụrụ iTunes na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod emetụ gị na kọmputa na-agba ọsọ iTunes.
Nzọụkwụ 3. On iTunes, pịa gị iOS ngwaọrụ. Jide Mgbanwe isi (Option isi na Mac) na keyboard na pịa 'Update' button na kọmputa gị. Na mmapụta window, chọta firmare na ị na-azọpụta na kọmputa gị ma họrọ ya. Pịa 'Open' ka iTunes-eme ndị ọzọ iOS 8 update maka gị.
Uru: Ọ bụ ezigbo ngwa ngwa iji kwalite na ngwaọrụ gị iOS 8 na otú a.
Ọghọm: Ị nwere ibudata nri femụwe mbụ. Ma ọ bụrụ na netwọk bụ mụ ezu, n'oge update usoro, ị nwere ike gharazie data na gị iOS ngwaọrụ.
Nhọrọ 3: jide Mgbanwe Key ma pịa 'Weghachi' na iTunes
Nzọụkwụ 1. Download iOS 8 femụwe n'ihi na gị iOS ngwaọrụ dị ka gị iOS ngwaọrụ nlereanya. Zọpụta ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Jide n'aka gị iTunes bụ ọhụrụ version. Ọ bụrụ na, imelite ya. Jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod emetụ gị na kọmputa na ẹkedori iTunes. On iTunes, pịa gị iOS ngwaọrụ. Na mmapụta window, ị pụrụ ịhụ ozi maka gị iOS ngwaọrụ. Na ndabere ebe, họrọ 'Nke a Computer' ma pịa 'Back Up Ugbu a'. Site n'ime nke a, ị na-ọma ndabere gị iOS data na kọmputa gị. Ị maara, otú a ga-akpa ihichapu niile data na ngwaọrụ gị na mgbe ahụ weghachi data ngwaọrụ gị si ndabere faịlụ na ị na kere mgbe iOS 8 update ọma.
Nzọụkwụ 3. Jide Mgbanwe isi (Option isi na Mac) gị keyboard na pịa 'Weghachi iPhone (iPad ma ọ bụ iPod)' 'ke otu window na iTunes. Ọhụrụ mmapụta window, ịhọrọ femụwe na ị na ebudatara na kọmputa gị na nzọụkwụ 1 na imeghe ya. Ka iTunes-eme iOS 8 update maka gị.
Nzọụkwụ 4. Mgbe upgrading ka iOS 8 ịga nke ọma, ị ga-ahụ na ihe niile data na ngwaọrụ gị na-arahụ. Iji nweta data azụ, pịa 'Weghachi ndabere'. Ọhụrụ mmapụta, họrọ nkwado ndabere na mpaghara na ị na-kere ke nzọụkwụ 2 ma weghachi data gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụ ya!
Uru: Ọ bụ ndị kasị dịrị nchebe ụzọ nweta nkwalite ka iOS 8. Iji otú a ga-mgbe na-esi gị data furu efu.
Ọghọm: Ị ga-aga site ogologo usoro nke upgradint ka iOS 8: download femụwe> ndabere data> melite iji iOS 8> weghachi data.
Iji hụ na ihe ịga nke ọma upgrading ka iOS 8 na gị iOS ngwaọrụ, biko jide n'aka na ị nwere ike izute chọrọ:
Nwere 6GB nchekwa dị na gị iOS ngwaọrụ. Na-eme iOS 8 update na na ngwaọrụ gị na-achọ nnukwu ohere. Ọ bụrụ na ị na-adịghị nke ukwuu nchekwa, ị kwesịrị ị ma na-agbalị nweta nkwalite ka iOS 8 site na iTunes ma ọ bụ na-agbalị ụzọ onwe elu ohere.
Nwere a anụ netwọk. Ọ bụrụ na gị WiFi bụghị anụ, mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ o yikarịrị ka ị ga-ada na-eme iOS 8 update;
Nwere zuru batrị ma ọ bụ jikọọ na ngwaọrụ ike isi iyi. Ọ na-ewe ogologo oge na-eme update na ihe iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike, mgbe ahụ, ị ​​ga-ada na-eme update;
Jide n'aka gị iOS ngwaọrụ na-adịghị jailbroken. Ma ọ bụ Ihere emegh id i n'aka, ị nwere ike ghara nweta nkwalite gị na ngwaọrụ iOS 8;
Ebe a bụ otú kwalite ka iOS 8 na ihe iOS ngwaọrụ ozugbo: Pịa Ntọala ngwa gị iOS ngwaọrụ> General> Software Update. Pịa Download na Wụnye bọtịnụ maka iOS 8. Mgbe mgbe ahụ, i kwesịrị enweta na-ekweta Apple si usoro na ọnọdụ. Mgbe iOS 8 echichi ngwugwu ebudatara ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ button 'Wụnye Ugbu a'. Enweta ya na-eche maka ngwaọrụ gị Malitegharịa ekwentị. Mgbe e mesịrị, enweta site na ntọlite ​​ihuenyo na ngwaọrụ gị. Ọ bụ ya!
5 Atụmatụ na iji nweta nkwalite ka iOS 8
Naghachi iPhone Ozi mgbe iOS 8 ọjọọ
Mfe Idozi Apple White ihuenyo nke Ọnwụ
Nyefee iPhone ka iPhone 6 na 1 Pịa
> Resource> iOS> Olee otú Wụnye iOS 8 on iPhone / iPad / iPod aka